Iingcebiso zeNtengiso zoLuntu lwezeNtlalo kwiSemalt Ufanele Uyazi
Ukuba uqhuba ibhizinisi elincinci kunye elitsha, kukho amathuba okuba ungawahoyi ufikeleleko lwentlalo. Yaye ukuba uchitha ixesha elingakumbi kwiiwebhusayithi ezifana ne-Facebook, i-Twitter, i-Pinterest, i-LinkedIn kunye ne-Google +, i-Nik Chaykovskiy, i-8 (Semalt ingcali, iqinisekisa ukuba ezi ndawo ziya kunika inzuzo eninzi kunye ixesha. Ngaloo ndlela, kubalulekile ukukhetha iindawo zezobuntu zentlalo ngobulumko kwaye uchithe ixesha elithile ekuphatheni kwabo. Ixesha elingakanani ochithayo liya kuthatha isigqibo sokuba zininzi iimbono zakho kwiwebhusayithi kwaye zingaphi iimveliso ongazithengisa kwi-intanethi. I-Facebook kunye ne-Twitter ziinkonzo ezibalulekileyo zentlalo zentlalo, apho iindawo zokuzikhethela kunye neentengiso zibaluleke kakhulu. Namhlanje, sabelane ngamanye amathiphu okuthengisa amajelo asekuhlaleni kubo bonke abashishini abancinci.
Nangona usebenzisa i-Facebook, kufuneka udale amaphepha, ujoyine uluntu kwaye ubenze abantu abaninzi nangaphezulu ngokusebenzisa iintengiso ze-Facebook. Le nto ayiyi kuhlawula imali eninzi, kodwa abaphulaphuli bakho baya kukwazi yonke into malunga nekhishini lakho kunye nebhizinisi lakho. Isinyathelo sokuqala kukudala ikhasi lakho lebhizinisi kwaye liqinisekiswe yi-Facebook. Qinisekisa ukuba uyayigcwalisa ngobuninzi bokubandakanya umxholo kwaye ubhale amanqaku aphambili malunga neempawu zakho. Yabelana ngephepha kuluntu kwaye ucele abanye ukuba bathande..Isinyathelo esilandelayo kukudala iziqulatho zokuqukethwe kwi-Facebook kwaye uthumele amanqaku xa abaninzi abalandeli bakho bekhompyutha. Kuya kuba kuhle ukuba uluhlu lwezithuba uze ufumane ukugqithiswa okukhulu, ngakumbi ngexesha lexesha eliphakamileyo.
Nangona usebenzisa i-Twitter, umgomo wakho kufuneka ube kukufumana abalandeli abaninzi kwaye ufake ama-hashtag afanelekileyo ukuze wenze oko kwenzeka. I-Twitter enye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisana kunye nokuthetha kunye nehlabathi. Ukuba iifayile zakho zihamba ngentsholongwane, unokuqiniseka ukuba ubukho obuphezulu bekhompyutha. Into yokuqala yokwenza ukuba kwenzeke kukuba ukwenziwa ngokufanelekileyo kwi-bio yakho. Faka igama lakho, umfanekiso wesiprofayili kwaye ubhale okufutshane ngawe ngekhonkco kwi-brand yakho. Isinyathelo esilandelayo kukuba ukhethe abantu ofuna ukuwalandela uze ubacele ukuba bakulandele. Phinda le nkqubo yonke imihla kwaye qinisekisa ukuba ugcina abaphulaphuli bakho banomdla ngexesha lonke. Ukuba wabelana ngezinto ezibandakanyekayo nezixhamlayo kwi-Twitter, kukho amathuba ukuba ufumane ininzi yabalandeli kwimiba yeentsuku.
i-LinkedIn yiyona yesithathu eyaziwayo kunye nentsangqa yendaba yoluntu. Apha abafuna umsebenzi kunye nabathengisi bahlangana rhoqo imihla ngemihla. Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba i-LinkedIn yiCV yakho ye-digital. Apha uya kufuneka ubhale ngamava akho kunye nobugcisa, umvelaphi wemfundo uze uzame ukudibanisa nenani elikhulu labantu. Abantu abaninzi odibanisa nabo, abaphakamileyo baya kuba ngamathuba okuba baqashiwe kwi-intanethi. Nangona xa usenza kwaye ukhuthaza ishishini kwi-LinkedIn, unokufumana lula ukukhutshwa ngokusekelwe kwinani lezonxibelelwano kunye nabalandeli. Khuthaza umxholo wakho apha rhoqo kwaye wabelane ngezinto ezibandakanyekayo phantse Source .